I-Twitter Ithembisa Izivumelwano Eziphephile Ezengeziwe Ngemuva KweBitcoin Hack | ICoinGenius Ibamba Umcimbi we-Virtual Crypto
I-Twitter Ithembisa Izivumelwano Eziphephile Ezengeziwe Ngemuva Kwe-Bitcoin Hack
Twitter kusho yona kuqinisa ezokuphepha ezilandelayo ukugqekeza okukhulu okwenzeke ezinyangeni ezimbalwa ezedlule.
I-Twitter ithi Ukulungisa Kwayo Ukuphepha Kwayo
Ngenkathi ingekho imali eningi eyebiwe, bekusabisa ukwenzeka bheka ukulandisa okunjalo abantu abasezingeni eliphezulu batholwa yichungechunge elincane labaduni. Abanye babantu ababandakanyeka kulo mkhonyovu kwakunguJeff Bezos wodumo lwe-Amazon, u-Elon Musk (i-CEO yabo bobabili uSpaceX noTesla), owayengumongameli uBarack Obama kanye nesikhulu seMicrosoft uBill Gates.
Ukukhuluma iqiniso, lezi zibalo ngokwazo zazingabandakanyeki ngqo ekwebeni okwenzekile. Esikhundleni salokho, kwathunyelwa imiyalezo engajwayelekile kuma-akhawunti abo. Imiyalezo eyimbumbulu eyayiphakamisa ukuthi abantu (abalandeli babo) kufanele bathumele imali kumakheli e-bitcoin angaziwa ayelawulwa ngabantu abadonsa izintambo. Kukonke nje, kweqe nje u- $ 120,000 ku-bitcoin webiwe kwizisulu ezingalindele, okuyiphepha, akusona isibalo esikhulu, kodwa umfana ... Kuyethusa ukubona amagama amaningi kangaka aphezulu emphakathini ehileleka ngokungazi entweni encane kangako.
Ephendula lokhu kuhlaselwa, abakwaTwitter baphawule ukuthi kuzobe kukhuphuka izindlela zokuphepha futhi bathathe nezinyathelo ezithe xaxa zokugcina abasebenzisi bephephile. Isibonelo, kwengezwe amathuluzi okuphepha ahlukahlukene kusayithi. Le nkampani iphinde iqeqeshe abasebenzi bayo ngokuqhubekayo mayelana nokuba sengozini kwama-akhawunti - ikakhulukazi ngemuva kokuphakanyiswa ukuthi mhlawumbe abasebenzi babenomthwalo wokunikeza abaduni lokho abakudingayo ukufinyelela ama-akhawunti kwasekuqaleni. Ukugenca kungenzeka ukuthi bekungaphakathi Umsebenzi, futhi iTwitter icacile ukuthi ikhathazekile ngedumela layo elisasele.
Esitatimendeni, uParag Agrawal - isikhulu sezobuchwepheshe - noDamien Kieran - umphathi wezokuvikela imininingwane - bobabili bachaze:
Lona ngumsebenzi esesiwuqalile kodwa siwusheshisile emasontweni adlule. Lokhu kuzosiza ekunciphiseni ubungozi benkampani yangaphandle engagunyaziwe ukuthola ukufinyelela kumasistimu ethu angaphakathi isebenzisa iziqinisekiso zabasebenzi ezifakwe engozini… Isibonelo, sethule izikhathi ezimbili zokuqeqeshwa okuyimpoqo kubantu abakwazi ukufinyelela kulwazi olungeyona olomphakathi.
Lokhu Kuza Ngakamuva Kakhulu
Emuva ngoJulayi, lapho kuqala ukugqekeza, umphathi we-Twitter Jack UDorsey uphawule ngokuthi inkampani "isilele emuva" uma kuziwa ekuqinisekiseni ukuthi amakhasimende ayo aphephile futhi avikelekile futhi uma kufikwa ekufakeni imikhawulo kumathuluzi angaphakathi, futhi ingxenye enkulu, lokhu kubonakala kuyitimu egijimayo uma kukhulunywa ngoDorsey. Uhlala ekhona ukusho ukuthi inkampani isilele emuva noma ukuthi i-Twitter isebenza ukuqinisekisa izindlela zobumfihlo nezokuphepha, kepha i-Twitter imvamisa ingenye yalezi zinkampani ezibonakala zifika sekwedlule isikhathi kulo mdlalo.
Isibonelo, khumbula ku 2018 lapho uDorsey ebanjwa ngamalungu eCongress maqondana nokukhonjwa kweTwitter nokushaya phansi ama-tweets nemiyalezo elandelanayo? UDorsey uthe inkampani ibisebenza ukuthuthukisa ubuchule obenze into enjalo, lokhu kuqondiswa kwabasebenzisi abasebenza ngokuziphatha okuqhubekayo kusaqhubeka, kusikisela ukuthi eminyakeni emibili, uDorsey akenzanga okuningi.
Tags: bitcoin, I-Bitcoin likaHack yilelo elaligqokwe, UJack Dorsey, Twitter Umthombo: https://www.livebitcoinnews.com/twitter-vows-stronger-security-after-bitcoin-hack/
Izihloko ezihlobene:2018AmakheliAmazonAnonymousukuhlaselabillamasango omthethoBitcoinI-Bitcoin likaHack yilelo elaligqokweblockchainBloombergCeocnbcCongressidathaBAKHALAelon muskfakeenikezaHackkubadunijeff bezosUJobeJULANIMicrosoftimalinewONEAbantuInqubomgomoingoziumkhonyovunokuvikelekaThumelaUmphakathiUbuchwephesheTeslaAmathuluzitopTwitterWHO
U-Ethereum Ufinyelela Ezingeni Lokunquma Ukudalelwa njengoba Abahlaziyi Babheka Ukuguquguquka
I-One-Way ETH 'Burn' Eyoqala Ukukhahlela i-Ethereum 2.0
Ukushintshaniswa kweGemini, abalingani be-TaxBit yokwandisa ukubikwa kwentela ye-crypto
Ama-Yearn Finance (YFI) Slips Ngezansi kwe- $ 10K ku-DeFi Bloodbath; Breakout Phambili?
I-Bitcoin ivala ama-High Highs Ngemuva Kokwenqatshwa kusuka ku- $ 13,650
Ukushintshaniswa kweGemini kusethelwe ukwenza ukubika kwentela kwe-crypto kumakhasimende ayo ngokusebenzisana kweTaxBit. Abatshalizimali bangakwazi ukulandelela nokwandisa ukuhweba kwabo okungahle kube nemiphumela yentela ephezulu besebenzisa ithuluzi. Ukubikwa kwentela ye-Crypto sekuba yinkinga kubatshalizimali abaningi, njengoba abantu abaningi bengazi ukuthi kufanele baba kanjani ngokunembile futhi […]
6 amaminithi adlule
Ukushintshaniswa kweGemini kusethelwe ukwenza ukubika kwentela kwe-crypto kumakhasimende ayo ngokusebenzisana kweTaxBit.
Abatshalizimali bangakwazi ukulandelela nokwandisa ukuhweba kwabo okungahle kube nemiphumela yentela ephezulu besebenzisa ithuluzi.
Ukubikwa kwentela ye-Crypto sekuba yinkinga kubatshalizimali abaningi, njengoba abantu abaningi bengazi ukuthi bangayibala kanjani ngokunembile futhi bafake imibiko yabo yentela. Kodwa-ke, ukuhwebelana okuningi kwe-cryptocurrency emhlabeni jikelele nezinye izinkampani ezihlobene bezisebenza ukwenza izinqubo zibe lula kubatshalizimali. Inkampani yakamuva kule ndlela ukuhwebelana ngeGemini, okusanda kumemezela ukubambisana neTaxBit.
Ukushintshaniswa kweGemini ukuhlinzeka ngamathuluzi wokubika wentela
Ngokusho the Imininingwane, inkampani yokushintshaniswa kwemali nokugcinwa kwezimali ezizinze eNew York, iGemini ingene ebudlelwaneni neTaxBit, okuyinkampani yesoftware egxile ku-crypto, ngo-Okthoba 29. Lo mfelandawonye kuhloswe ngawo ukwenza lula zonke izinqubo zokubika kwentela ye-crypto kubadayisi abakhulu futhi abatshalizimali ekushintshaneni kweGemini. Ngakho-ke, iGemini izokwengeza amathuluzi okubika wentela yedijithali kumasudi ayo ezinsizakalo.
Ithuluzi elibikiwe lizonikezwa amandla yi-TaxBit's Tax Center Suite solution, ezokwenza ngokuzenzakalela izibalo ezidingekayo zemibiko yentela yabasebenzisi. Abathengisi ekushintshaneni kweGemini bazokwazi ukuqapha umthelela wentela wanoma yikuphi ukuhweba ngemali yedijithali abakwenzayo ekushintshaneni kwe-cryptocurrency. Ekugcineni, labatshalizimali ngeke bathwale kanzima ekubalweni kwentela njengoba zonke izinqubo zizenzekelayo.
Ngokwengeziwe, ukushintshaniswa kuphawuliwe kulwazi lokuthi imibiko yentela evela kuthuluzi elizenzekelayo iza ngefomethi efanayo eyenziwe yafaniswa ne-United States Internal Revenue Service (IRS). AbakwaTaxBit bangeze ukuthi abathengisi be-crypto nabatshalizimali ekushintshaneni kweGemini bangakwazi ukwehlisa isikweletu sabo sentela kusuka kuthuluzi lentela. Ithuluzi lingabenza ngokulinganayo bakwazi ukukhulisa amathuba abo okuthola imbuyiselo yentela.
Udaba lokubika kwentela ye-cryptocurrency njengamanje lubhekwa njengendaba ebucayi, ngokungafani nangaphambilini lapho abatshalizimali bengazi ukuthi imali abayitholayo evela emisebenzini ye-crypto iyakhokhiswa. I-IRS nayo ayikaze wehlise ukukhumbuza abatshalizimali yesidingo sokubika amadili abo e-crypto wentela.
16 amaminithi adlule
Isiqalo esihle seYearn Finance kwikota yesithathu siyaphela ngokuthengisa ngesihluku.
I-aggregator yokulima isivuno ithole ukulimala okukhulu kuleli sonto njengoba ithokheni layo lokuphatha, i-YFI, lehle ngamaphesenti angama-39. Emahoreni wokugcina angama-24 kuphela, i-cryptocurrency uhlangabezane nokwehla kwentengo ngamaphesenti ayi-10.35, umnyakazo obuye wawubona uthatha ukudipha okufishane ngaphansi kwama- $ 10,000 - kuya ku- $ 9,600 - ngaphambi kokuthola kabusha ngenhla kokulinganiswa kwamanani amahlanu.
Kepha lokho akuzange kuyisuse i-YFI ekudambeni kwayo kwesikhathi eside. Ngemuva kokuphuma ku- $ 44,026 ngoSepthemba 12, ithokheni yeYearn Finance yaphahlazeka ngamaphesenti angama-78.19, yashaya imali ephansi yama- $ 9,600 kuseshini yanamuhla nje. Ukuhamba kwayo kushiye abadayisi beqagela ukuthi intengo izobuyela phambili yini noma izoqhubeka nokuwohloka phansi.
Izingozi ze-Yearn Finance zishayisa ku- $ 6,229, ngokusethwa kwezohwebo kukaCantering Clark. Umthombo: YFIUSD ku-TravingView.com
Izingozi ze-Yearn Finance zishayisa ku- $ 6,229, ngokusethwa kwezohwebo kukaCantering Clark. Umthombo: I-YFIUSD ku-TravingView.com
Funda Ukubukwa Kwezezimali
Umhlaziyi wezimakethe u-Alex uthe ukwehla kwe-YFI kwakamuva kube njengengxenye yokwehla okubanzi kuyo yonke enye i-cryptocurrency (
"U-Alts ushone ngobusuku obubodwa," wabhala U-Alex. “Ukungabi nathemba kuyinto eyeqisayo. Lindela ukuqhuma okuqinile ngesikhathi sesikhathi sase-US kucatshangelwa ukuthi ubungozi buphakeme (okusho ukuthi akukho ukuchitheka kwegazi ezimakethe zezimali). Cishe ilungele u- + 10%. Akunjalo I-YFI iwela emgqeni oqondile (yize ishadi lamasonto onke lingavumelani). ”
Khonamanjalo, umhleli wamashadi uCantering Clark ubize i-YFI ngokuthi “inkomba phambili” ye- impilo yonke yemakethe yakwaDeFi, kuqaphela ukuthi ukwehla kwayo kukhombe kwizivuno eziphansi ezitholakala kuwo wonke amachibi okwenziwa kwemali.
“Izithelo kulo lonke leli bhodi zizoma kakhulu, kepha abathengisi abasha sebegxumela ngababili manje bengazi ukuthi bangaki abathola isikhundla esingesihle ngaphezulu futhi bacela umhlangano wokusiza abazowuthengisa,” - yena tweeted ngolwesihlanu.
Njengoba kusitshekelwe ngaphambili, ukwehla kwe-Yearn Finance kushiye umzila wamazinga aphansi kakhulu naphansi, okunikeza isithombe sesakhiwo se-Falling Wedge.
I-Yearn Finance yakha iphethini ye-Falling Wedge. Umthombo: YFIUSD ku-TravingView.com
I-Yearn Finance yakha iphethini ye-Falling Wedge. Umthombo: I-YFIUSD ku-TravingView.com
I-Wedge Wedge iyiphethini yokuguqula i-bullish eqala ububanzi kepha izinkontileka njengoba intengo yefa yehla. Isiqinisekiso se-bullish siza lapho intengo yehla ngaphezu komugqa wendlela ephezulu we-Wedge, kuhambisana nokwanda kwevolumu. Lokho ngokujwayelekile kuthatha ifa liphakeme njengobude obukhulu phakathi komugqa wendlela ophezulu nophansi we-Wedge.
Lokho kuphakama kungu- $ 23,210. Ibeka ibanga lempokophelo yokuphuma ye-YFI noma kuphi ngaphezulu kwe- $ 30,000.
Ngo-Okthoba 29, iBitcoin (BTC) yazama ukuqala ukuhambela phezulu kodwa yenqatshwa indawo yokwesekwa yangaphambilini futhi yakha intambo ende ende. Intengo kulindeleke ukuthi ekugcineni yehle kusuka emazingeni amanje ukuze yehle iye ezinhlosweni zokusekelwa eziphansi. I-Bitcoin Lower Highs Izolo, i-Bitcoin ifinyelele endaweni eyi- $ 13,130 futhi yakha […]
Okuthunyelwe I-Bitcoin ivala ama-High Highs Ngemuva Kokwenqatshwa kusuka ku- $ 13,650 ivele kuqala I-BeInCrypto.
28 amaminithi adlule
Ngo-Okthoba 29, Bitcoin (I-BTC) izamile ukuqala ngokuya phezulu kepha yenqatshwa indawo yokwesekwa yangaphambilini futhi yakha intambo ende ende.
Intengo kulindeleke ukuthi ekugcineni yehle kusuka emazingeni amanje ukuze yehle iye ezinhlosweni zokusekelwa eziphansi.
I-Bitcoin Lower Highs
Izolo, i-Bitcoin ifinyelele endaweni engu- $ 13,130 futhi yakha isibani samakhandlela esikhukhulayo. Ngenkathi leli zinga libukeka sengathi lizoqala i-rally, i-BTC ifinyelele kuma- $ 13,675 aphezulu ngaphambi kokudala intambo ende ephansi nokuncipha. Lokhu kusebenze ukudala isihlobo sokuqala esiphansi esiphakeme kunani lentengo ka-Oct 28.
Ngesikhathi sokushicilela, i-BTC yayiphinde futhi yahweba eduze nendawo yokusekela eyi- $ 13,130. Uma lokhu kusekela kwehluleka, i-BTC ingahle ibuyele emuva ku- $ 12,770.
Ishadi le-BTC NgokuhwebaBuka
Ishadi lesikhathi esifushane alibonisi noma yiziphi izimpawu zokubuyiselwa emuva ezinamandla. Kokubili i-MACD ne-RSI kuyehla futhi akukhiqizanga ukwehluka kwe-bullish.
Qhubeka ufunde ngezansi
Ngaphezu kwalokho, siyabona ukuthi i-BTC inqatshelwe indawo engu- $ 13,675. Leli zinga lisebenze okwesikhashana njengokwesekwa ngemuva kokuthi iBitcoin iqale ukubuyela emuva kusukela ekuqaleni kwayo yonke isikhathi ekuqaleni kuka-2018.
Indawo esekwe ngenhla engu- $ 13,130 yokusekelwa nayo isekelwa ukwakhiwa kwesando esishisayo kanye nesibani sezibani esikhanyisayo, ngakho-ke uma singaphumeleli, kungadala ukwehla okubukhali kakhulu.
KumaBeinCrypto Ukuhlaziywa kwe-Oct 29, sathi:
“Cishe intengo isiqalile nge-wave 4, okuyiyona elungisa. Izinga elingenzeka kakhulu lokuthi i-wave 4 iphele lizoba phakathi kuka- $ 12,083- $ 12,442, amazinga we-0.382-0.5 Fib wokunyukela phezulu konke. ”
I-Wave 4 ingahle ihambe ngaphakathi kwesakhiwo sokulungisa i-ABC, lapho intengo okwamanje iku-C wave (ekhonjiswe ngombala obomvu ngezansi).
Amazinga amathathu okungenzeka ukuthi ukuphela kwe-wave kuzoba ku- $ 12,683, $ 12,419, noma $ 12,086. Lezi zinhloso zihambisana namazinga we-1, 1.27, no-1.61 Fib wegagasi A.
Njengoba izinga le- $ 12,683 liphinde liqondane nendawo yokusekelwa echazwe esigabeni sokuqala, kungenzeka kakhulu ukuthi isebenze njengaphansi.
Kodwa-ke, ukwehla kwamanje (okugqanyiswe ngezansi) kulindeleke ukuthi kube yingxenye yokuqala yokulungiswa okude okungathatha i-BTC kulitshe eliphansi kwe-wave 4 (ekhonjiswe ku-orange).
Njengamanje, izinketho ezimbili ezithandeka kakhulu kungaba ukulungiswa okuyisicaba (okumnyama) noma ukwakheka konxantathu (okumhlophe). Kusukela ukuqala kokunyakaza kubukeka kufana kuzimo zombili, asikakwazi ukunquma ukuthi yini okungenzeka ukuthi yenzeke.
Ukuphetha, kungenzeka ukuthi iBitcoin isiqalile igagasi lokulungisa okulindeleke ukuthi lithathe intengo liye ku- $ 12,670 esikhathini esifushane futhi ekugcineni liye ebangeni lama- $ 12,083- $ 12,442.
Ngokuhlaziywa kwangaphambilini kweBitInCrypto, Chofoza lapha!
Ukuzikhulula: Ukuhweba nge-Cryptocurrency kuthwala ubungozi obukhulu futhi kungahle kungalungeli bonke abatshalizimali. Imibono evezwe kulesi sihloko ayibonisi eyeBeInCrypto.